पुतली जहाजबाट पोखरा हेर्दै हरिवंश फोटो (फिचर सहित) • Pokhara News by Ganthan
पुतली जहाजबाट पोखरा हेर्दै हरिवंश फोटो (फिचर सहित)
प्रकाशित २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
पोखरा, २६ भदौ /पोखरा घुम्नु आफैमा रमाइलो हो । त्यस माथी पनि पोखरालाई आकाशबाट हेर्नुको मज्जा कस्तो हुन्छ ? पक्कै पनि निकै मज्जाको अनुभव हुन्छ । मगंलबार विहानै कलाकार हरिवंश आचार्यले पोखरालाई आकाशबाट अवलोकन गरे । आकाशमा कावा खाँदै पोखरालाई हेर्न पाउँदा कस्तो अनुभव भयो त हरिवंशलाई ? ‘प्रकृत पोखरालाई आकाशबाट हेर्दा स्वर्गको कल्पना गरेँ’ पुतली जहाजमा उडेर पोखरा परिक्रमा गरिसकेपछि हरिवंशको प्रतिक्रिया यस्तो थियो । हरिवंशसहित उनकी पत्नि रमिलाले पनि हावामा कावा खाँदै पोखरालाई हेरेर भरपुर आनन्द लिईन् । हरिवंश दम्पत्तीले पुतली जहाजको उडान निकै रमाईलो भएको बताए ।
हरिवंशको जीवनकथा ‘चिना हराएको मान्छे’को अँग्रेजी सँस्करणको तयारी भैरहँदा पोखरामा विभिन्न कार्यक्रमका लागी पोखरा आएका उनि पोखरा अल्ट्रालाईट प्रालिले आकाशबाट पोखरा हेर्ने मौका जुराईदिएको थियो । पोखराको आकाशमा हरिवंश जोडीलाई विशेष अतिथिको रुपमा शयर गराईएको पोखरा अल्ट्रालाईट प्रालिका पोमनारायण श्रेष्ठले बताए ।
दक्षिण एशियामै पोखरा अल्ट्रालाईट उडानको लागि प्रख्यात छ । पोखरामा एभिया क्लबले पनि अल्ट्रालाईटको उडान गर्दै आएको छ । व्यवसायीहरुले दिएको जानकारी अनुसार पोखराको आकाशमा वर्षेनी हजारौ पयर्टकले पुतली जहाजमा चढेर हावामा कावा खाँदै पोखराको सुन्दरतालाई नियाल्छन् । एड्भेन्चर पर्यटनको केन्द्र हुँदै गएको पोखरालाई आकाशबाट हेर्नका लागि विशेषगरि प्याराग्लाईडिङ र पुतली जहाजको प्रयोग हुँदै आएको छ । पछिल्लो सयममा चाइनी र भारतीय पर्यटक यस्कै लागी पोखरमा आउने गरेको व्यवसायी बताउछन् । उनिहरुको पहिलो रोजाइ अल्ट्रालाइट हुने गरेको छ ।
फेवातालमा बेपत्ता लुईटेल मृत फेला २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
रवीन्द्रको स्मृतीमा पोखरामा विभिन्न कार्यक्रम हुने २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
सहारा एकेडेमीलाई बार्षिक ५ लाख- मन्त्री सुनार २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
बंगाल ट्राभल मार्टमा पोखरा नाइट २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
दोश्रो गार्डेन कप ‘सेभेन ए साइड’ फुटबल प्रतियोगिता शुरु २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
नेविसंघ द्वारा अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्तालको घोषणा २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
फेवाबजार (fewabazar.com) मा १ रुपैयाँमा इयरफोन, भाग्यशाली बिजेतालाई स्मार्ट फोन २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
एशियन टुर प्याराग्लाईडिङ वल्र्डकप, मौसमका कारण पहिलो दिनको टास्क रद्द २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
सरकारलाई अलोकप्रिय बनाएन विपक्षी लागे- प्रधानमन्त्री ओली २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५
पोखरा फेवातालमा डुङगा पल्टियो, दुईको उद्धार एक जना बेपत्ता २६ भाद्र २०७०, बुधबार १७:३५